ပန်ဒိုရာ: ပန်ဒိုရာရဲ့ ဒုတိယအကြိမ် - ၁
ကိုရင်နော် ခင်လေးငယ် တို့က တက်ဂ်လာပါတယ်။ ဒုတိယအကြိမ် ပြန်ဖတ်စေချင်တဲ့ ပို့စ်လေးတွေ ရှိရင် တင်ပေးပါတဲ့။ ကိုယ့်ဘာသာလည်း ဒီဘလော့ဂ်က စာတွေကို လူတွေ ဘယ်လောက် ဖတ်ပြီးပြီလဲဆိုတာ စစ်တမ်းလေး ကောက်ထားပါတယ်။ မဖတ်ရသေးတဲ့လူတွေ များနေရင် ပြန်တင်ချင်တဲ့ တချို့ပို့စ်တွေကို ဒုတိယအကြိမ် တင်သွားရင် ကောင်းမလားလို့ စဉ်းစားနေတုန်းမှာပဲ တက်ဂ်လိုက်တော့ အတော်ဖြစ်သွားပါတယ်။
ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ရေးခဲ့တဲ့ ပို့စ်လေးတစ်ခုကို သတိရမိပါတယ်။ ကိုရင်နော်ခင်လေးငယ် အမှတ်တရလည်း ဖြစ်တာပေါ့။ သူတို့ဘလော့ဂ်ကို ပထမဆုံးသွားလည်ခဲ့စဉ်က သူငယ်ချင်းနှစ်ဦး ပေါင်းပြီး လုပ်ထားတဲ့ ဘလော့ဂ်လေးမို့ သဘောကျပြီး ပန်ဒိုရာရေးတဲ့ ဒီပို့စ်လေးကိုလည်း လာဖတ်ပါဦးလို့ ခေါ်ခဲ့သေးတယ်။ ကိုရင်နော်ခင်လေးငယ် တို့လည်း မှတ်မိမယ် ထင်ပါတယ်နော်။
၂၀၀၇ ဂျွန်လက ရေးခဲ့တဲ့ ၀တ္ထုတိုလေးပါ။ အဲဒီအချိန်ပိုင်းတွေက ရယ်စရာမောစရာ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးတွေ တော်တော်ရေးဖြစ်တယ်။ ရယ်စရာသန့်သန့်ကို ဖန်တီးဖို့ရာဖြစ်ဖြစ် ခံစားနိုင်ဖို့ဖြစ်ဖြစ် ဆိုတာ လူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာ လောဘ ဒေါသ မောဟတွေ စင်နေတဲ့ အချိန်ပိုင်းလေးဖြစ်မှ ဒါမှမဟုတ် အတော်ပါးလျနေမှ ရနိုင်တယ် လို့ ကြားဖူးပါတယ်။ ကိုယ့်အတွက်တော့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးစာကို ရေးချင်တိုင်း ရေးလို့ အလွယ်တကူ မရပါ။ အခုတော့ အရင်လောက် စိတ်တွေ မကြည်လင်နိုင်တော့တာလည်း ကြာခဲ့ပြီလေ။ ဧပြီ ၁ ရက်နေ့ကတော့ ပျော်ရွှင်စရာ စာတခု ရေးဖြစ်ပါတယ်။ ဖတ်ပြီး ရယ်မောသွားကြတယ်ဆိုရင် ၀မ်းသာပါတယ်။
ပို့စ်အဟောင်းလေးကို ပြန်ခံစားကြည့်ကြပါဦး။ မဖတ်ရသေးရင်တော့ အသစ်ပေါ့နော်။
အင်တာနက် လောကသား မှန်လျှင် ဘလော့ဂ်တစ်ခုတော့ ပိုင်ဆိုင်ကြသော ယနေ့ ခေတ်ကြီးတွင် ကိုဖိုးရမ်လည်း ဘလော့ဂ်တစ်ခု တည်ထောင် ထားပါသည်။ သို့သော် သူ့ စိတ်ဝင်စားမှုကတော့ ဖိုရမ် forum များတွင် ရေးသားခြင်းကို ပိုသည်။ အဦးဆုံး မြန်မာဖိုရမ်များထဲမှ ဖြစ်သော ဇလုံဖိုရမ်မှ စ၍ ရတာနာ၊ ပုလင်းနက်၊ မြန်မာကော်ဖီရှော့၊ နှေးထစ်ဖိုရမ်၊ ပဒုံပျော့ ဖိုရမ်၊ မြန်မာဘလော့ဂါဖိုရမ် စသည်တို့သာမက ပရော်ဖက်ရှင်နယ်များ စုဝေးသော မြန်မာအန်ဂျီပျိုများ ဖိုရမ်ပါမကျန် သူ့ခြေရာ အဲ.. သူ့အိုင်ပီအက်ဒရက်စ် တွေချည်း။ အပြော ကလည်း ကောင်း၊ ငြင်းခုံ ဆွေးနွေးရာတွင်လည်း ချက်ကျလက်ကျ အာဘောင်အာရင်း သန်ပေရာ အလွန် လူကြိုက်များ ရေပန်းစားလှလေသည်။
မဘလောက်ကတော့ ဘလော့ဂါလောကတွင် ပိုမို နာမည် ထင်ရှားသည်။ သူမသည် မြန်မာ အင်တာနက် ခေတ်ဦးက ဖိုရမ်များတွင် ၀င်ဖတ်ဝင်ရေး လုပ်ခဲ့သော်လည်း ဘလော့ဂ် blog ဆိုသည်များ ခေတ်စားလာတော့ ဘလော့ဂ်ကိုသာ ပိုစိတ်ဝင်စားကာ ဖိဖိစီးစီး ရေးနေသူ ဖြစ်သည်။ စိတ်ဝင်စားဖွယ် စာ၊ကဗျာ၊ ရုပ်ပုံလှလှ၊ သီချင်းကောင်းကောင်းများ ဝေေ၀ဆာဆာဖြင့် အင်တာနက် ပရိသတ်ကို ဆွဲဆောင်နိုင်သူဖြစ်သည်။ ဘာသာစကား ကျွမ်းကျင်ကာ အရေးအသားကောင်းရုံ သာမက ဘန်နာ လှလှ ဘက်ဂရောင်း ဆန်းဆန်းပြားပြား ကလေးများ ဖြင့် ဘလော့ဂ်ကို သပ်သပ်ရပ်ရပ် အလှဆင်ကာ ပို့စ်များကိုလည်း စနစ်တကျ နေရာချ စီစဉ်တတ်သော မိန်းကလေးဘလော့ဂါ ပီသသူလေး ဖြစ်သည်။
မဘလောက် က မြန်မာ ဘလော့ဂါ ဖိုရမ်တွင် သူမ၏ဘလော့ဂ် ကို မိတ်ဆက်သည့် ပို့စ်တစ်ခု သွားတင်ထားသည်။ ဒါကိုကိုဖိုးရမ်က တွေ့သွားပြီး ဘာရယ်မဟုတ် လာလည်မိရာမှ မဘလောက် ၏ ပရိသတ် ဖြစ်သွားကာ ဆီပုံးဟုခေါ်သော C Box ထဲတွင် အမှတ်တရ စာတစ်ကြောင်း နှစ်ကြောင်း အမြဲ ရေးသွားလေ့ရှိသည်။ မဘလောက်ကလည်း ကိုဖိုးရမ်၏ ဘလော့ဂ်ကို ပြန်လည်ပတ်သည့် အပြင် ကိုဖိုးရမ်ရေးလေ့ရှိသော ဖိုရမ်များတွင် သူမပါ ရီဂျစ်စတာ လုပ်ပြီး ၀င်ဖတ် ကြည့်ရင်း ကိုဖိုးရမ်၏ ပြောနိုင်ဟောနိုင် ဗဟုသုတ အရည်အချင်းများကို အထင်တကြီး သဘောကျ လာမိသည်။
ဒီလိုနှင့် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ တစ်ယောက်အကြောင်း တစ်ယောက်သိလာ အပေးအယူမျှလာသည်။ အခေါ်အဝေါ်လေးတွေက အစ “ကိုကိုရမ်” က “လောက်လေး” က ဟုကြင်ကြင်နာနာ ဖြစ်လာကြပြီ။
ဒီတော့လည်း ဒီလောက် လိုက်ဖက်ညီတဲ့ နှစ်ယောက် ဘလော့ဂေ့ဂ်ျ blogage လုပ်ကြပါလား ဟု ပတ်ဝန်းကျင်က တိုက်တွန်း လာကြသည်။ ( မှတ်ချက်။ အဓိပ္ပာယ် အနှစ်သာရ တနည်းအားဖြင့် ဆင်သယောင် ရှိသော်လည်း blockage မဟုတ်ပါ။) ဘလော့ဂေ့ဂ်ျ လုပ်ခြင်း ဆိုသည်မှာကား ဘလော့ဂါနှစ်ဦး ပူးပေါင်း၍ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဘလော့ဂ် တစ်ခု ထူထောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ မြန်မာဘလော့ဂါများကတော့ ဘလော့ဂ်ထောင်ကျခြင်း ဟုလည်း တင်စား ခေါ်ကြလေသည်။
အင်တာနက် လောကကြီး အရည်အသွေး တိုးတက်ရေးအတွက် ဘလော့ဂေ့ဂ်ျ လုပ်ခြင်းကို ပေါ်လစီအရ ကမ္ဘာနှင့်အ၀ှမ်း အလွန်အားပေးလေသည်။ ဘလော့ဂေ့ဂ်ျ လုပ်လိုပါက ဘလော့ဂါနှစ်ဦးသည် အင်တာနက်ဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂမှ တရားဝင် ယူအာအယ်လ် နှင့် ၀က်ပေ့ဂ်ျ ခေါ် အင်တာနက် စာမျက်နှာ တစ်ခု လျှောက်ထားရသည်။ သာမန် အပျော်ထမ်း ဘလောက်နေကြသော ဘလော့ဂါများသည် ယခုအခါတွင် အခမဲ့ ရသော အင်တာနက် စာမျက်နှာ များကိုသာ သုံးခွင့်ရလေသည်။ တာဝန်ယူမှုမရှိသည့်အတွက် တရားဝင် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် စာမျက်နှာကို အင်တာနက်ဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂမှ သုံးခွင့်မပြု။ (ယုံချင်ယုံ မယုံချင်နေ။) ထို့ကြောင့် သူတို့၏ဘ၀မှာ မတည်ငြိမ်။ အာမခံချက်မရှိ ။ တစ်နေ့နေ့ ဆားဗစ်ပရိုဗိုက်တာ က ၀န်ဆောင်မှု ဖြတ်လိုက်လျှင် သွားပြီ။ အဲ.. တစ်ဖက်ကလည်း သူတို့ဘ၀က လွတ်လပ်သည်။ တာဝန်ယူမှု များမှ ကင်းသည်။ ကိုယ့်ဖာသာ ပုံမှန် ပို့စ်တင်ချင်တင် မတင်ချင်နေ။ ပြီးတော့ ကိုယ်ရေးချင်တာ လွတ်လပ်စွာ ရေးလို့ရသည်။
ဘလော့ဂေ့ဂ်ျလုပ်ထားသော ဘလော့ဂ်များကတော့ ဒီလိုမဟုတ်။ ပုံမှန်ဝန်ဆောင်မှု အပါအ၀င် ကြော်ငြာ အကျိုးခံစားခွင့်များပါ ရှိသော တရားဝင် နိုင်ငံတကာ အင်တာနက် အသိအမှတ်ပြု ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အင်တာနက် စာမျက်နှာကို ကိုယ်ပိုင် ပိုင်ဆိုင်ခွင့် ရသည်။ အလွန်ဂုဏ်ရှိ ကာ တင့်တယ် တည်ငြိမ်သော ဘ၀ပါပေ။ သို့သော် တစ်လလျှင် ပို့စ်ဘယ်လောက် တင်ရမည်။ အဲဒီအထဲမှာ အင်တာနက် လောကကို အကျိုးပြုရန် နည်းပညာပို့စ်က ဘယ်လောက်၊ ဖျော်ဖြေမှုက ဘယ်လောက် စသည်ဖြင့် သတ်မှတ်ထားသည်များကို လိုက်နာရသည်။ ဘန်နာ ၊ တန်းပလိတ် များကို အချိန် ဘယ်လောက်ကြာလျှင် အပ်ပဒိတ် လုပ်ရန် ဆိုတာမျိုးက ရှိသေးသည်။ ကိုယ်သုံးမည့် အိုင်ပီအက်ဒရက်စ်များကို မှတ်ပုံ တင်ရခြင်း၊ ကိုယ်သုံးမည့် ကွန်ပျုတာနှင့် အီလက်ထရွန်းနစ် ဒီဗိုက်စ်များမှာ ဗိုင်းရပ်စ် ကင်းရှင်းကြောင်း ထောက်ခံစာယူရခြင်း၊ ဒါတွေက လိုသေးသည်။ ဒီလို ကော်မစ်မန့်ဆိုတာများ ကို ဘလော့ဂါ တစ်ဦးချင်း အနေနှင့်ဆိုလျှင် လိုက်နာနိုင်ရန် မလွယ်။ ဒါကြောင့်လည်း အတွေးအခေါ် မျှတကာ တာဝန်ခွဲဝေယူနိုင်ကြရန် အမျိုးသား အမျိုးသမီး ဘလော့ဂါနှစ်ဦးတို့ ပူးပေါင်းစေရခြင်း ဖြစ်သည်။ ဘလော့ဂေ့ဂ်ျ လုပ်ပြီးလျှင်တော့ တသက်လုံး မကွဲမကွာ ချစ်ချစ်ခင်ခင် သစ္စာရှိစွာဖြင့် ဘလော့ဂ်ကလေး ကို တိုးတက် စည်ပင်အောင် မောင်တစ်ကီး မယ်တစ်ကလစ် (မှတ်ချက်၊ 1 key, 1 click ကိုဆိုလိုသည်။) ဆောင်ရွက်ကြရလေသည်။
ဒီအထဲမှာ ဘလော့ဂါရိုက် ဆိုလားဘာလား၊ ဂေးဘလော့ဂါ လက်ဘ်ဘလော့ဂါတို့က ကျားကျားချင်း မမချင်း ဘလော့ဂေ့ဂ်ျ တော့ ဘာဖြစ်လဲ၊ သူတို့ကိုလည်း အသိအမှတ်ပြု အင်တာနက် စာမျက်နှာ ချပေးသင့်သည် ဆိုပြီး တစခန်းထကြသေးသည်။ အဲဒါတွေ အသေးစိတ် ပြောပြရလျှင် ဇာတ်လမ်းကို ရောက်တော့မှာ မဟုတ်။ ဒီတော့ ဇာတ်လမ်းကို ဆက်ပါမည်။
အဲ.. နှစ်ယောက်ပိုင် ဘလော့ကမ္ဘာလေး တည်ထောင်စတော့ ကြည်နူးမဆုံးနိုင်။ ဘလော့ဂ်ကို စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့် admin access က နှစ်ယောက် နာမည် ကိုယ်စီဖြင့် ပုံသေ default လုပ်ထားသည်။ လော့အင် log in ၀င်ပြီး နှစ်ဦးတည်း ရေးသားတိုင်ပင်နိုင်ရန် အများမမြင်နိုင်သော အထူး ဆီပုံးကလေး ကတော့ သူတို့နှစ်ယောက် အတွက် သီးသန့်ကမ္ဘာလေးဖြစ်သည်။ တစ်နေ့တစ်နေ့ ဘာပို့စ်လေးတွေ တင်ကြမလဲ တိုင်ပင်ကြ။ ကိုဖိုးရမ်က ပို့စ်တစ်ခု ရေးပြီးလျှင် ဘာသာဗေဒ ကျွမ်းကျင်သူ မဘလောက်က စာလုံးပေါင်းတွေ စစ်ပေး သီချင်းလေးတွေ အမောပြေ ဖွင့်ပြနှင့် အရာရာသည် လမင်းသာသလို။ ဘလော့တစ်ခုလုံးလည်း စာနု ကဗျာနုလေးများ၊ သီချင်း ဓာတ်ပုံ ကလေးများ၊ နည်းပညာ အသစ်ကလေးများ လွှမ်းခြုံကာ ရောမန္တိက ဖြစ်နေလေသည်။ ကိုကိုရမ် နှင့် လောက်လေး တို့၏ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ ဘလော့ဂဟာလေးပေတည်း။
ဤသို့ဖြင့် ငါးလ ခြောက်လ ကြာလာခဲ့ပြီ။ တစ်ခါလာလည်း လော့အင်ဝင်ကာ ငြိမ်ငြိမ်ထိုင်ပြီး တန်းပလိတ်ပြင်ရ တစ်ခါလာလည်း လင့်ခ်တွေ အပ်ပဒိတ်လုပ်ရ ပို့စ်အသစ်ရေးရ ကွန်မန့်တွေကို ပြန်ရေးရ နှင့်ဆိုတော့ ဘလော့ဂ်တာဝန်တွေကို ကိုဖိုးရမ် ငြီးငွေ့စပြုလာသည်။ တနေ့တနေ့ ဘာပို့စ်တင်ရမလဲ ဆိုတာ တွေးရတာကိုက ဦးနှောက် ခမ်းခြောက်စ ပြုလာသည်။ ပြီးတော့ အရင်ကလိုလည်း မဟုတ်။ ကိုယ့်သဘောနှင့်ကိုယ် ပို့စ်တွေ တန်းတင်လို့မရ။ မတင်ခင် မဘလောက်ကို ပြရ၊ စာလုံးပေါင်းစစ်ရ၊ သဘောတူမတူ ညှိရနှိုင်းရ တာတွေကလည်း စိတ်ကျဉ်းကျပ်စရာ ကောင်းလေသည်။
“ကိုဖိုးရမ်ကြီး ဘယ်လိုလဲဗျ။ ဘလော့ဂ်ထောင်ကျသွား ကတည်းက ဖိုရမ်တွေဘက် ခြေဦးတောင် မလှည့်တော့ပါလား။ ဧကန္တ မဘလောက်ကို ကြောက်ရတယ်နဲ့ တူတယ်။ ဟတ် ဟတ် ဟတ်..”
ဒီတော့ တခါတခါ မယောင်မလည်ဖြင့် ဖိုရမ်တွေ ဘက်ကို ခဏဆိုပြီး လစ်ထွက်သွား တတ်သည်။ မဘလောက်က သြော် သူလည်းပျင်းမှာပေါ့လေ ဟု နားလည်စွာဖြင့် အစပိုင်းက ကြည်ကြည်သာသာ ခွင့်ပြု ခဲ့ပါသည်။ ဒါပေမယ့် တစတစ လေးလံလာသော ဘလော့ထိန်းသိမ်းမှု တာဝန်တွေ ကြားမှာ ကိုဖိုးရမ်က နမော်နမဲ့ အလျင်စလို လုပ်သွားသဖြင့် ပို့စ်အမှားများ အက်ဒစ် ပြန်လုပ်ရတာတို့။ နေရာပြန်ချရတာတို့က များလာတော့ နည်းနည်း ငြိုငြင်ချင်လာသည်။ အရင်ကလို ကိုကိုရမ် ဟုပင် ချိုချိုသာသာ မခေါ်နိုင်။
“တော့ ကဖိုးရမ် ရှင်ဟာလေ.. ပို့စ်တွေကို သေသေချာချာ သတ်ပုံမစစ်ဘူး ။ သြော်.. ဒီမှာလည်း ကြည့်စမ်းပါဦး တန်းပလိတ်မှာ ဖောင့်သွင်းတာ ကျန်ခဲ့ပြန်ပြီ။ ဒီနေရာမှာ မြန်မာစာ မပေါ်ဘူးရှင့်။ ကျွန်မက ဒီလို အသေးစိတ်တွေ ကအစ အကုန် လိုက်စစ် နေရတော့မှာလား..”
“ဦးရမ် …မောနင်း.. မီးက နှေးထစ်ဖိုရမ်မှာ တွေ့ခဲ့တဲ့ မီးမီးလေ။ မီးလည်း အခု ဘလော့ဂ်တစ်ခု လုပ်ထားတယ် သိလား။ ဦးရမ်က သိပ်တော်တာပဲနော်။ ဦးရမ် မီးဆီလာလည်ပြီး မီးကိုသင်ပေးနော်.. နော် ။”
မဘလောက်တစ်ယောက် ကိုဖိုးရမ် လော့ဂ်အင်ဝင်လာမည့် အချိန်ကို ကလစ်တခေါက်ခေါက် နှင့် စောင့်နေသည်။ ကြာတော့ စိတ်တိုလာသည်။ ကိုဖိုးရမ် ရှိနိုင်မည့် ဖိုရမ်များကို လိုက်သွားပြီး လော့အင် ၀င်ကာ ပီအမ်တွေ ပို့ပစ်လိုက်သည်။
“ဦးဖိုးရမ်ရှင့်၊ ကိုယ့်ဘလော့ဂ်ကိုလည်း တစ်ချက်လောက်များ ပြန်လှည့်ကြည့်ပါဦး။”
“တော့ ကဖိုးရမ်.. ရှင့်အရှုပ်ထုပ် တွေ ရှင်လာရှင်းပါဦး။”
“သြော်.. ဘာရေးရေး ရှင်တလွဲတချော်လုပ်ထားတာတွေ ကျွန်မက လိုက်လိုက် ပြင်ပေးနေရတဲ့ အချိန်တွေကိုလည်း ထည့်တွက်ဦးမှပေါ့။”
တိုက်ပွဲက ပြင်းထန်လာသည်။ ကိုယ်ပိုင် ပရိုက်ဗိတ်ဆီပုံးမှာသာမက အပြင်က ဆီပုံးထဲကိုပါ လျှံကျကုန်သည်။ စိတ်ကြီးသူနှစ်ဦးဆိုတော့ ဘလောက်နီးနားချင်းတို့လည်း ၀င်မပြောရဲ။ အသာလေး ဘေးကသာ အရိပ်အခြည် စောင့်ကြည့်နေရသည်။
အို.. တွေ့စ ကာလတွေကများ နည်းပညာအသစ်တစ်ခု ရလာလျှင် သူ့ဘလော့ဂ်မှာတောင် ပို့စ် မတင်ရသေးခင် ကိုဖိုးရမ်တစ်ယောက် လာလာပြောခဲ့ပုံ။ မဘလောက် မလုပ်တတ်လျှင် ၀င်ပြင်ပြင် ပေးလိုက်ရတာက အမော။ မနက်မနက် ဆိုလျှင်လည်း သူများထက်ဦးအောင် ဆီပုံးထဲ လာလာ နှုတ်ဆက်ရတာက တမျိုး။ မဘလောက် ကြိုက်တတ်သည့် ပန်းပွင့်ပုံ ရှုခင်းပုံ လှလှကလေးများ ရလာလျှင် ပိုးကြေးပန်းကြေး လာလာပေးရသည်က တဖုံ။ စောင်းမြောင်းကာ ကဗျာတွေ စပ်ရသည်ကတော့ မရေမတွက်နိုင်။ ဒါတွေကို တစိမ့်စိမ့်တွေးမိတော့ ကွန်ပြူတာ စခရင်ပေါ်မှာ တရေးရေး မြင်ယောင်လာသည်။ အင်း သူ ငါ့အပေါ်မှာ ကောင်းခဲ့တာတွေ အများကြီး ရှိခဲ့ပါတယ်လေ။ ငါကိုယ်တိုင် ကိုက ဘလော့ဂေ့ဂ်ျ လုပ်ပြီး တော်တော်လေးကြာတော့ သူ့ကို အရင်လို ပျော်ရွှင်အောင် ထားဖို့ တာဝန်တွေကြားမှာ မေ့လျော့ နေခဲ့တာပဲ။
မဘလောက်နာမည် အစိမ်းရောင်လေး လင်းလာသည်။ နှစ်ဦးပိုင် ဆီပုံးလေးထဲမှာ ကိုဖိုးရမ်၏ စာကြောင်းကလေးတစ်ခု မရဲတရဲ ပေါ်လာသည်။
“အို.. နေပါဦး ကျွန်မ တစ်ခေါက် ထပ်စစ်ပေးဦး မှာပေါ့။”
လောက်လေး လို့ ခေါ်တော့ ရွံ့ တွန့် တွန့် ဖြစ်သွားတယ်.. ခေါ်စရာ ရှာလားဗျာ။ မသကာ ဂေါက်လေး..အဲ ဂါလေး ပေါ့ :P
ဟတ်ဟတ် ကဖိုးရမ်နဲ့လောက်လေး တော်တော်လည်း လိုက်တဲ့အတွဲ ...
အဟီး ဖတ်လို့ အားရလိုက်တာ....
ပြန်ပေါင်းထုပ်တာလေး ကြိုက်တယ်။ အဲလိုလေး ဖြစ်ခွင့်ရရပါစေသား...။
မှတ်မိတာပေါ့ဗျ.. ဒီပိုစ့်လေးကို သေချာဖတ်ခဲ့တာ..
ဒီလို အနှစ်လေးတွေကို ဖတ်ချင်နေလို့ကို အကြံဖန်ထုလိုက်တာလေး ဟေးဟေး..
ကိုဖိုရမ်နဲ့ မဘလောက်သာ အပြင်မှာ တကယ်ရှိရင် ချက်ချင်း သွားမိတ်ဆက်ချင်စိတ်တွေ ပေါက်လာတယ်..
မပန်ရေ.. ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးတွေက တကယ်ကို ပေါ့ပါးသွားစေတယ်ဗျာ.. ဟာသဉာဏ် လေးကလည်း လန်းပါပေ့.. ထပ်ဖတ် ထပ်ပြုံးရတုန်းပဲ..
ဒို့များနဲ့ ခပ်ဆင်ဆင် တူတာလေးတွေ ပါနေတော့ ဖတ်ရတာ ပိုပြုံးမိတာပေါ့.. ခပ်ဆင်ဆင်ဆိုလို့ တလွဲတော့ မတွေးလိုက်ပါနဲ့ ခင်လေးနဲ့ အနော်က ဘော်ဘော် အရင်းကြီးတွေပါ..း)
ဘလော့စရေးခါစကဆို ရယ်ရတယ်.. ဘလော့ကို သေချာ ပြင်ဆင်ထား မနက်နိုးလာရင် ဇောက်ထိုးဖြစ်နေရော.. သူက သူ့အကြိုက်လုပ်တယ်.. ကိုယ်က ကိုယ့် အကြိုက်လုပ်တယ်.. လာလည်သူတွေ တော်တော်မျက်စိ လည်လောက်တယ်.. သူပြင်လိုက် ကို ပြင် လိုက်နဲ့ ဘလော့လည်း ၅ မိနစ် တစ်မျိုးကို ဖြစ်လို့.. ခုတော့ သဘောတူထားကြတယ်.. ဘယ်သူမှ မကလိကြေးလို့..
ဂျီတော့ မှာလည်း ပြဿနာက တမှောက် အကောင့်တစ်ခုကို နှစ်ယောက် တူတူသုံးနေတော့ ခက်ပြီပေါ့..
ကိုရင်လား.. ခင်လေးလား.. လို့ အရင်မေးရတယ်.. မဟုတ်ရင် သူဖြေလိုက် ကိုယ်ဖြေလိုက်နဲ့ တဖက်က စိတ်ညစ်ရော.. အနော်ကလည်း နောက်တတ်တော့ ပိုဆိုးတာပေါ့.. အဲ့လို အဲ့လို..း)
မပန်ရေ.. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ လေးလေးနက်နက်ကြီးကို ပြောလိုက်ပါတယ်.. အခုလို လက်ရာမျိုးလေးတွေ ထပ်ရေးပါဦးလို့ တောင်းဆိုပါတယ်..း)
ခင်မင်လေးစားချစ်ခြင်းအားဖြင့် ဂျီတော့လည်း အက်လိုက်ရင်း (ဘာမှမဆိုင်) ဟီးးး
ဒီပို့်စ်ကို ဘာလို့ လွတ်သွားတာပါလိမ့်...။
အခုလည်း ကြည့် မပန်ရေးပြီးတာကို update လုပ်တာ ဒင်းးးလည်း လုပ်တယ် အနော်လည်း လုပ်တယ်..
ပန်ဒိုရာ (ရေးပြီး) (ရေးပြီး)
အဲ့လို နှစ်ခါ ဖြစ်သွားတယ် ပြန်ပြင်ရရော.. ဟီးးးး ညစ်တယ်.. ပြေးမှ ထင်တယ်..း)))
သေချာကို ဖတ်ဖူးခဲ့ပြီး သဘောကျခဲ့တဲ့ စာတပုဒ်ပဲ ပန်ပန်ရေ။
အခုမှ ဖတ်ရတယ်... :D အတော်လေး သဘောကျသဗျာ။ အမက ဒါမျိုးတွေလည်း ရေးတတ်နေမယ်လို့ မတွေးမိဘူး။ မိုက်တယ်.. ဂယ်ပဲ :D....
သိတ်ကောင်းတယ်။ ဖတ်လို့ ပြန်တင်ပေးတာဝမ်းသာတယ။်
ဟုတ်တယ်။ တို့စိတ်တွေက ကြည်တယ်။ ကြည်တော့ရယ်စရာကို စဥ်းစားလို့ရတယ်။ လောကြီကပီးတစ်ခုလုံးလှနေတယ်။ သစ်ပင်တွေလည်းလှ တိမ်တွေလည်းလှ။
ပို့စ်အသစ်ရေးရ ကွန်မန့်တွေကို ပြန်ရေးရ နှင့်ဆိုတော့ ဘလော့ဂ်တာဝန်တွေကို ကိုဖိုးရမ် ငြီးငွေ့စပြုလာသည်။ တနေ့တနေ့ ဘာပို့စ်တင်ရမလဲ ဆိုတာ တွေးရတာကိုက ဦးနှောက် ခမ်းခြောက်စ ပြုလာသည်။
ရေးတတ်လွန်းလို့ ...ညနေက အပြည့်ထိသွားတာ...
Reprint ကို လာရောက် ခံစား ရယ်မောသွားပါတယ်။ ဒီ့ထက် ကြိုက်တာ တစ်ပုဒ် ရှိသေးတယ်။ မပြောသေးဘူး ဟိ။
yeah. Really Good.. MM lo yite lo ma ya lo..Eng lo pe` type lite` tae`... ma pan yae...really good... 100% good.
မပန် မဖတ်ဖူးသေးဘူး... စိတ်ကူးကောင်းလိုက်တာ... ၀တ္ထုတွေ အားလုံး ကြိုက်တယ်။
ကိုကိုရမ်နဲ့ လောက်လေး... ဟီဟိ
လောက်လေး ဆိုတော့ မဆီမဆိုင် မနေ့က Virus ပိုစ့်ထဲက ဇာဂနာနဲ့ ဖယ်ထုတ်လိုက်ရတဲ့ လှုပ်လှုပ် တွန့်တွန့် အကောင်လေးကို သွားမြင်မိတယ်....
အဲဒီပို့စ်ကို ပုံရိပ်လည်း သဘောကျတယ်။ အဲဒီလိုမျိုး ထပ်ရေးပါလို့ တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။
ဖတ်ပြီး ပြုံးသွားတယ်။ :D
ပန်ပန် အစောပိုင်းရေးတဲ့..ဟာသ ဆန်ဆန် လေးတွေ အရမ်း ကောင်းတယ်။
အမှန်ပဲလေ..ဒါမျိုးတွေကို စိတ်ကလေးတွေ ပျော်နေမှ ရေးလို့ရတာ..ရှားပါးပစ္စည်းလေးတွေ။
လူ့စိတ်နဲ့ရေးထားတဲ့စာ တွေက..လူ့စိတ်ကို ထင်ဟပ်နေတာပါပဲ။
ပျော်စရာ လေးတွေ ထပ်ရေးနိုင်ပါစေ-
တခါမှ မဖတ်ဖူးသေးဘူး...ဖတ်လို့ကောင်းလိုက်တာ မပန်ရာ..စိတ်ထဲမှာလည်း လေးလံနေတာတွေ ပေါ့ပါးသွားသလိုပဲ...
မဖတ်ဖူးသေးဘူး ပန်ပန်ရေ။ အခုမှ ဖတ်ဖူးတာ။ ပြန်တင်ပေးတာ ကျေးဇူးပဲ။
ဒါမျိုးလေးတွေ များများ ရေးပါ ပန်ပန်။ တကယ်ကောင်းတယ်။ ကိုရင်တို့ ခင်လေးတို့ကိုလဲ ပန်ပန့်ကို ခုလို တက်ဂ်ပေးတဲ့အတွက် ပြန်ဖတ်ရလို့ ကျေးဇူးတင်လိုက်တယ်။
အကြိုက်ဆုံးတွေထဲက တပို့စ်ပါပဲ။ နောင်လာနောက်သားလေးတွေ ဖတ်ရအောင် “ချက်ခြင်း၏ အနုပညာ” တို့ဘာတို့ပါ ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါဦး။
ဒီစာ ရှယ်တာကတော့ အပေါ်က ကိုကို၊ မမတွေပြောသွားပြီးလို့ ထပ်ပြောဖို့မလိုအောင်ပါဘဲ။ စာဖတ်သူအမြင်ကတော့ အိမ်ထောင်တစ်ခုရဲ့ဘဝပုံရိပ်တွေ ထင်ဟတ်နေတဲ့ဇာတ်လမ်းလို့ခံစားရတယ်။
IT နဲ့ ပတ်သက်ရင် အမတို့လို ငတုံးတွေ အတွက်
ရီလဲရီရ ဗဟုသုတလဲ ရတဲ့ ပို့စ်လေး
ဇာတ်လမ်းကတော့ တို့ကိုများ စောင်းရေးထားလေရော့သလား ...
အခုမှ ဖတ်ရတယ်...ရေးပြီးသားထဲက ပြန်ရွေးထုတ်တဲ့အစ်မကော..
ဒုတိယအကြိမ်Tag တဲ့ ကိုရင်နော်တို့ပါ ကျေးဇူး..။
ဟိ ရယ်ရတယ်။ အမကအဲလိုလည်း ရေးတတ်တယ်။
တီ လာလည်တယ် လာဖတ်တယ် ဖတ်ရင်းနဲ့ မျက်နှာက ပြုံးလာတယ် ပြုံးပြုံးလာတယ် ဖတ်နေရင်း ကိုရင်နော် နဲ့ တီလေးငယ် ကိုသတိရတယ် ပြီးတော့ ပန်ဒါလို....လို ဘာလိုလို ကတော်တော် တော်တာပဲလို့တွေးနေမိတယ်
နောက်တော့ ပြန်ပေါင်းထုတ်တဲ့အခန်းလဲရောက်ရော တခိခိ ဖြစ်လာတော့တာပါပဲ
ဒီကိုဖိုးရမ် မဘလောက်ကို အစ်မစရေးကတည်းက အရမ်းကြိုက်လို့ သုံးလေးခေါက် ဖတ်ဖြစ်တယ်။ အခုညွှန်းတော့ ထပ်ဖတ်သွားတယ် :)